U-Edwin Van Der Hoeven - Ukuzindla, Ukuzwela, Mediumship
"Yonke ingaphezu kwesamba sezingxenye zayo"
Thatha isivivinyo uzitholele ngokwakho
Landa izivivinyo (zamahhala) futhi uzitholele zona
Yini ekuvimba ekugcwalisekeni kwamaphupho akho?
ISELF Expression & CREATIVITY
Thola ulimi olukhulunywa umphefumulo wakho
Ukuxhumana nezwe elingabonakali
Ngithemba ukuthi uzokuthola okufunayo kuleli sayithi. Kungasethwa ngokuhlukile okuhlukile kunalokho okulindele noma okusetshenziselwa kusuka kumaphakathi noma kumqeqeshi. Angikholelwa ngokweqiniso ekufakeni ikepisi ethi ngiyisangoma manje bese ngithanda i-crypto futhi. Konke kuxhumene futhi ngithola ugqozi kuzo zonke izizinda zempilo.
Ngikubona futhi lokhu nababambiqhaza ukuthi ngivunyelwe ukukuhola ngendaba ezimpilweni zabo. Bafika basebenza ku-X kodwa bathole ukuthi empeleni kufanele kubhekelwe ukunakwa. Isipho salokho ukuthi bathola imiphumela emihle kuzo zonke izici zempilo yabo. Futhi kufanele! Akukho okuhlukanisiwe komunye nomunye ngakho-ke isithombe esigcwele sibalulekile. Kungaleso sikhathi kuphela lapho impilo yethu ingaqhakaza khona ngokugcwele.
Sonke singaphezu kwesamba sezingxenye zaso! Njengomuntu, ebudlelwaneni, nomndeni wakho noma nabangani bakho nozakwabo.
U-Edwin van der Hoeven - HSP / ukuzwela okuphezulu, ingokomoya kanye nokuphakathi
Njengoba amaBuddha esho: bonke abantu banento eyodwa efanayo futhi lokho 'ukufuna injabulo'. Incazelo yenjabulo inezincazelo eziningi ngazinye; imali eningi, ukubukeka okuhle, umlingani omuhle, impumelelo, impilo enhle, inkululeko, ubuciko nokunye.
Ungafuna injabulo ngaphandle kwakho noma ngaphakathi kwakho.
Abantu abaningi emazweni aseNtshonalanga bagxila enjabulweni engaphandle kwabo, kodwa-ke, okuhlangenwe nakho kukhombisa ukuthi lokhu kuvame ukunikeza ukwaneliseka okwesikhashana nokuthi usheshe uqale ukufuna ukuchofoza okulandelayo. Kulapho uhlakulela injabulo yangaphakathi lapho une- isimo sokuba lokho kunothando futhi kunamandla, kugcina ukunaka kwakho kugxile futhi kunikeze ugqozi lwempumelelo yomuntu siqu.
Ngishiyela izimo zakho zangaphandle ngokuphelele kuwe. Ngiyajabula ukukusiza ngokulima kwangaphakathi kwenjabulo, ukuqeqesha ingqondo nolimi lomuzwa wakho.
Ukwazi okuningi? Ufike endaweni efanele ... ngothando, u-Edwin
Imininingwane mayelana nezaphulelo kusilinganiso ingatholakala lapha.
Ukuzethemba kuvezwa enjabulweni engapheli yokuthi konke kuhle njengoba kufanele kube njalo. Konke ongakwenza manje ukuthi wazi ngokuphila.
Ukuzwela kwethu kuyindlela yokuthola amaza nokuphakama kokuqonda nokuphila. Ngabe ujwayela ini? Lapho sazi okukhulu, yilapho sesikwazi khona ukubumba izimpilo zethu. Ngale ndlela ungasebenzisa umuzwa wakho wokuhola impilo enhle nokudala.
Ukubona okuzwela kakhulu
Ingabe uzwela kakhulu? Lapho-ke ubuchopho bakho bucubungula imininingwane eyengeziwe yezinzwa futhi uyicabangisise ngokujulile. Okuhlangenwe nakho kwakho kwezinzwa kukhulu kakhulu, kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kunesiphithiphithi futhi uhlangabezana nokuthile ngokushesha okukhulu njengokusha noma okuhlukile; uvuselelwa kakhulu yizikhuthazi kunomuntu ojwayelekile.
Ngubani noma yini i-HSP?
Imibuzo eyi-9 ebuzwa njalo
Lapho umuntu ekhuluma ngokuthuthuka kokuqonda bese ukuzindla 'isimo sokuzwa'. Isimo sokwazi ngalo mqondo sidlula amasiko asinikeza izindlela zokukufeza isimo sokuba ukuza. Eminyakeni edlule ngakho-ke kaningi angifundisanga amasiko athile, kepha izindlela zokufeza isimo sokuzindla. Ngaphezu kwalokho, ngisiza abantu ukuthi babone amandla angaqondakali ama-mantras ngokwenza imantra yabo noma ngokusebenzisa, isibonelo, I-Vajra Guru mantra evela ePadmasambhava.
Umcabango umshayeli wokubheka okumbaxambili, ngenkathi ukuphefumula kukunika ithuba lokuhlangana nomuntu ophakeme. Ukuzindla ukufunda ukuyeka kusho ukuthi manje. I-The Now asazi sikhala nesikhathi, akukho mina nawe. Ku-Manje konke kumunye!
Lapho uzizwa ukhululeke ngokwengeziwe ukuveza 'ubukhona' bakho, kuzoba lula ukuthola ithoni yakho ngenkathi ucula amazwi aphindaphindwayo.
zibeke wena kuqala
Yini eyenza umbono wakho siqu, ifilosofi yakho? Ngabe umsebenzi wakho uyisici esibalulekile enjabulweni yakho, ekhaya lakho, ekuzilibaziseni kwakho, kumlingani wakho nasemndenini noma ngabe ufuna okwenzekayo ... uyathanda ukuhamba futhi ingabe ukhetha ukuthola izinto ezintsha ngokuqhubekayo? Ngokubona kwami ​​ayikho impendulo eyiyo noma engalungile, kodwa kunempendulo eyodwa vo; okwakho. Uyaphila iphupho lakho? Noma awazi ukuthi uzoqala kanjani futhi kuphi. Mhlawumbe lezi zihloko zingakunika ugqozi ... isiqalo.
I-27 september, 2019
Ukulamula yikhono lemvelo lokuqonda okucacile kwezinzwa lapho ungaxhumana khona nokwazi koshonile. Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane >
I-22 Januwari, 2020	Akunazimpendulo
Umhlaba wokomoya uhlakaniphile futhi uyazi ukuthi ungawunaka kanjani futhi nini. Hhayi ukukukholisa, kepha kunalokho ukwenza izinkolelo zishabalale ukuze uvulekele isimangaliso sempilo.
Novemba 21, 2019	Akunazimpendulo
Hhayi inkolo ',' kepha injabulo iyinkolo! Angazi ngawe, kepha lapho ngihlangana nomngane wami omuhle kuyangijabulisa.